Ve ny Kristianina rehetra mpisorona? – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny / Filaharana masina / Ve ny Kristianina rehetra mpisorona?
Saint Peter nanoratra, "Ianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, Ny ny vahoaka " (1 Pet. 2:9). Marina fa ny Kristianina rehetra anjara amin'ny mpisorona an'i Kristy amin'ny alalan'ny batisa, nefa io fisoronana iombonan'ny dia tsy maintsy avahana amin'ny fanompoana fisoronana. Inona no Petera hoy ny mpino ao amin'ny Testamenta Vaovao, raha ny tena izy, koa hoy Isiraely tamin'ny Taloha, "Ary ho ahy ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina" (Taloha. 19:6). Ao anatin'ny mpisorona firenen'ny Isiraely, na izany aza, nisy iray miavaka, fanompoana fisoronana, ny Levita mpisorona. Dia iray ihany izany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao. izahay, koa, dia mpisorona firenena; ary ao ny laharana misy manokana, ara-tsakramenta fisoronana misahana ny nitarika ny Sorona ny Lamesa, kaominina ny asa fanompoam-pivavahana.
Ny fahitana ny Lamesa ho sorona mampiavaka Katolika ankoatra ny Kristianina hafa. Ao amin'ny Lamesa ny soron'i Kristy TEO AMIN'NY HAZO FIJALIANA natao tsakramenta eo tamintsika teny an-alitara amin'ny alalan'ny Eokaristia Masina. Izany tsy midika hoe maty i Jesosy indray Mass. Kosa isika raha ny tena Nentina niverina amin'ny alalan'ny fotoana ny fotoana ny ny fahafatesany mba hahafahantsika hitory sy mandray anjara amin 'izany famonjena sorona.
Ao amin'ny Filazantsara, ny Apôstôly dia omena ny fahefana hiahy fankalazana ny Eokaristia. Hitantsika izany ao amin'ny tantaran'i Kristy fampitomboana ny mofo sy ny trondro, ny Eokaristia fanoharana, izay ny Tompo dia mandidy ny Apôstôly mba hamahanana ny vahoaka (Matt. 14:16). More mivantana, amin'ny Fiaraha-misakafo Farany, teo afovoan'ny nanombohany ny Eokaristia, Nandidy ny Tompo ny Apôstôly, "Ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy" (Luke 22:19). Nanazava ny Apôstôly Paoly nantsoina “mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ao amin'ny mpisorona fanompoana momba ny filazantsaran'Andriamanitra, ka dia ny fanatitra 'ny Jentilisa mba ho ekena, hamasinin 'ny Fanahy Masina” (Rom. 15:16). Ary any an-kafa izy nanoratra, “Izany no fomba tokony tsy mandinika antsika [i.e., ny Apôstôly], ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina'ny zava-miafina [i.e., sakramenta] 'Andriamanitra. … Fa na manana mpitari-dalana maro be ao amin'i Kristy, tsy manana ray maro. Fa izaho no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara” (1 Kor. 4:15).
Raha ny teny hoe "mpisorona" dia mety tsy ho be mpampiasa ny Kristianina tamin'ny andron'ny apostoly, mety hametraka ny mpanao fanompoam-pivavahana afa-tsy ny mpisorona ny Isiraely (cf. Rom. 15:16, ambony), misy porofo be dia be avy any amin'ny faran'ny taonjato voalohany hatrany ny teny hoe izy io no ampiasaina ho an'ireo izay hiahy ny Eokaristia. Nanoratra tao ny momba ny taona 96 Taorian'i JK, ohatra, Saint Papa Clément avahana mazava tsara eo amin'ny fanompoana sy ny fisoronana ny fisoronan 'ny mpivavaka tsotra. “Ary ny mpisoronabe,” izy nanoratra, manondro an'i Kristy, “omena ny andraikiny: ny mpisorona [i.e., eveka] dia asaina ny toerana manokana, rehefa eo amin'ny Levita [i.e., diakona] asa manokana no napetraky. Ny laika dia fehezin'ny ny laika ny fehezan-dalàna” (Taratasy Clement Ho An'ny Korintiana 40:1-5). Arak'izany, izany no voalohany ao ohatra ny teny hoe “laika.”
Tamin'ny momba ny taona 107, Saint Ignace, ny Eveka avy any Antiokia sy mpianatr'i ny Apôstôly Jaona, nanoratra, “tsara, koa, ny mpisorona; fa ny mpisoronabe [i.e., Kristy] tsara kokoa, izay natolotra ho adidiko, ny masina indrindra; ary ho azy irery ihany no nomena ny zava-miafina izay an'Andriamanitra” (Taratasy ho an'ny mponin'i Philadelphie 9:1). Nanoro hevitra ny Kristianina koa izy mba “manaraka ny eveka toy ny nataon'i Jesosy Kristy ny Ray. Araho, koa, ny loholona rehefa nety ny apostoly; ary manaja ny diakona rehefa nety ny lalàn'Andriamanitra. Tsy misy na inona na inona dia tsy maintsy manao izay misy ifandraisany amin 'ny Fiangonana raha tsy misy ny eveka ny fankatoavan'ny. Tokony mihevitra fa ny Eokaristia ho manan-kery, izay ankalazaina na ny eveka na ny olona iray izay manome alalana [i.e., ny presbyter]. Aiza ny eveka dia ankehitriny, dia aoka ny fiangonana hanangona, toy izay i Jesoa Kristy no, misy ny Fiangonana Katolika” (Taratasy ho an'ny Smyrneans 8).